Inona avy ireo topping tsara indrindra ho an'ny waffles? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Vovonan'ny waffle belza - vahaolana maharitra
Vovonan'ny waffle belza - vahaolana maharitra
Inona avy ireo topping tsara indrindra ho an'ny waffles?
7Tappings Waffle tsara indrindra
Dibera marika apricotika. Ity dibera feno voankazo ity dia mahafinaritra amin'nywafflesfa izany koaLEHIBEamin'ny mofo crusty, popover mafana, pancakes ary muffins.
Saosy sôkôla-Fudge belza.
Voaroy miaraka amin'ny siramamy vita amin'ny voasarimakirana.
(Akoholahy akoho) (Liona mierona) - Tongasoa eto amin'ny Mythical Tsara Bebe Kokoa. Nanolotra sosokevitra waffle hafahafa tianao izy ireo ary ho hitantsika izao raha mifanaraka na tsy mifanaraka izahay. - Fa hanome $ 1000-350 $.org aloha izahay! 350.org dia hetsika iraisam-pirenena ataon'ny olon-tsotra miasa mba hamahana ny krizy momba ny toetrandro sy ny taonan'ny solika fôsily ary hananganana tontolon'ny angovo azo havaozina tarihin'ny fiaraha-monina ho an'ny rehetra.
Samy mandray anjara izahay ary manome, ary tianay ny hanasa anao hanome ao amin'ny 350.org/donate.- Eny, zahao izy ireo.
Vakio manontolo izy ireo. Zahao ihany koa ny podcast anay Biscuits. Isaky ny alatsinainy dia mamoaka kinova audio vaovao izahay na aiza na aiza ahafahanao mahazo ireo podcasts anao.
Ny alahady manaraka dia hamoaka ny kinova lahatsoratra izahay. Henoy, ny tiana holazaina dia miresaka zavatra izay resahintsika amin'ny fiainantsika isika, manodin-javatra isika - dingana maro. Dingana iray ny ankamaroany - mendrika izany.
Zahao izy - mendrika izany - mendrika izany. Zahao hahitanao azy. - Inona koa no hataonao? - Iza no nanolotra an'izany? - Tsy fantatro.
Mieritreritra avy hatrany aho, andao handeha. Kris izany-- Kris miaraka amina K. @ marityne.- jamam-boasary ary Tabasco.
Mamy sy mafana! - Ooh, mamy sy mafana.- Mieritreritra aho fa afaka ho eo aho, anadahy .- Heveriko fa nametraka zavatra i Josh, nanampy kojakoja Tabasco kely tsara tarehy.- Tsy azoko antoka hoe ohatrinona amin'ilay Tabasco azoko ilay izy - Karazan-javatra toa komet waffle manidina amin'ny habakabaka - Handeha amin'ny toerana nalehako mihitsy ianao.
Ie, tiako holazaina fa io no manaikitra voalohany. Tsy hanao an'izany aho rehefa avy eo. Eny, efa nitady ny sasany aho, tsy fantatro raha ao i Tabasco. - Tsy afaka milaza marimarina koa aho.
Tsara. Tsara ny nananako - tsia. Somary maranitra ilay izy - heveriko fa mifangaro - Ie - tiako io lehilahy io.
Mamy sy mafana.- Ny tabasco dia ao anaty gajam-boasary ary ampy hampandehanana anao fotsiny izany, huh, ireo zavatra mahatonga anao handeha.- Hmm- Tsy hafahafa aho, ry Kris, heveriko fa marina izany .- I mahita azy somary hafahafa, fa.- Tonga tampoka izany.
Mety ho toy ny inona ianao, manome Tabasco sy jamam-boasary? Tsara ny jamam-boasary.- Taorian'ny nahitanay ny tantely mafana sy ny fanobiana pizza, na farafaharatsiny nataoko ilay harena mafana hita.- Betsaka ny zavatra hitanao tamin'ity taona ity.
Nahafantatra momba ny tantely mafana ianao .- Misokatra amin'ny zavatra niainako vaovao aho.- Inona koa no nianaranao? - Jamam-boasary mafana.
Tokony hotadidinao izany. Manaikitra hafa indray aho. - Misy manana jelly poivre ve? - Nieritreritra an'izany fotsiny aho.
Ity no tiako indrindra, toy ny amin'ny boaty fromazy charcuterie, jelly dipoavatra - azoko lazaina aminao. - Dia izay. - Ny palette Stevie dia maniry ny jelly dipoavatra.
Marina izany. Eny, niara-nanao jelly dipoavatra sy fromazy fanosotra teo amin'ny harona iray ianao? - Nanamboatra fromazy osy tamin'ny sombin-mofo iray aho - fromazy sy jelly dipoavatra - tsara izany. Tokony hampiditra fromazy fanosotra sy jelly dipoavatra fotsiny ianao eo ambonin'ny zava-drehetra.
Afaka mihinana ireo zavatra roa ireo fotsiny ianao. Tsara tokoa - Ary izany antony izany ihany no tena tsara - Ka izany antony izany ihany - Kris, nataonao izany. Nanaitra anay ianao.
Nanokatra ny tontolonay ianao. Nanitatra ny faravodilanitra ianao. Nahazo an'i Kleenex teo amin'ny fork ianao.
Aza diovina amin'ny Kleenex ny forkinao. Mampiasà lamba famaohana taratasy. Hayden Anstine nisioka hoe: 'Ny zavatra hafahafa napetrako tamin'ny waffle-ko dia ny patsa sy ny voantsinapy Honey, tena tsara izany ry zalahy.
Tokony manandrana ianao. 'Okay. Mahatsiaro ho toy ny fanamboarana izany.
bisikileta ho an'ny zazavavy 10 taona
Mahatsapa fa tena nanao an'io io olona io. Toy ny, eny, nahita zavatra aho. Toa izany, nanontany tena aho. ' raha hataon'izy ireo izany.
Ary fantatrao fa hanao izany izahay. - Mihainoa ary. - Voanio sy voan-tantely amin'ny waffle? - Hayden Anstine.
Somary tso-po ilay bitsika, fa rehefa mijery ilay Ikona ianao dia misy olona bisikileta maloto - Oh, mampidi-doza izy - tianao ny patsabe sy ny grits, fantatrao - Fa ny volombavan'ny tantely? - Akoho sy waffles. Shrimps sy grits. Mifangaro ary.- Amin'ny farany miaraka amin'izany.- Ao anaty boaty.
Heveriko fa raha mpitaingina bisikileta ianao dia froufrou kely io. Tiako ny makamba amin'ny entana. Hanandrana makamba aho amin'ny zavatra sasany .- Efa nametraka voan-tsinapy tamin'ny udao ve ianao? Angamba tokony ho nanao an'izany ianao - Ny tsinapy sy ny voan-tantely dia zavatra tsara.
Ny waffle dia mofo fotsiny - efa nisy nametraka voan-tantely teo ambonin'ireo sahoza? - Tsia, saingy mahatsapa aho fa nasianao bacon amin'io, mety ho tsara kokoa aza izany - Eny - Miala tsiny amin'ny nolazaiko momba anao aho, Hayden .- Hayden, marina ny anao. Manampia bacon - Aza manenjika ahy amin'ny bisikiletanao.
Aza mandroaka ahy aho ary mahaloto ahy - Stevie, tena nofantsihinao izany satria somary masira fotsiny. Miaraka amin'ny voan-tantely, mila masira izy.- Mila bacon kely.- Miaraka amin'ny akoho sy waffles no ahazoanao ny sira ary mbola ny syrup.
Oh zavatra izany. Kavina sy waffles. Zavatra izany.
Roa ho an'ny roa - eny. Tsy maintsy lazaiko - ampio bacon - Tena tiako io - na dia sombin-tsakafo raha ilaina izany - tsia. Fantatrao ve izay holazaiko? - Lazao.- Bac-Os.- Ianao dia iray amin'ireo olona vitsy izay tia Bac-Os.- Tsy tiako ny Bac-Os, fa mila ilay triatra ianao.
Tsy misy eto. Ny waffle dia manana crispness kely. Tiako kokoa ny tapa-bacon. - Tonga foana ianao ary naka an'i Bac-Os tao an-tranoko.
Dia efa niteny tamin'ny reninao ve ianao mba hividy azy? Satria tsy toy ny entana lafo vidy izy ireo - ahoana hoy ianao? Tsy mahazaka entana lafo vidy ny reniko? - Milaza aho fa afaka nahazo ny bac-os ratsy ao an-tranonao ianao. Ary manana azy ve ianao izao? - Tsy nanontany an-dreniko momba ny Bac-Os mihitsy aho, satria avy eo handeha any an-tranonao aho, maninona aho no mankany an-tranonao? ? - (chuckles) Hevitra tsara, okay, faly aho mifototra amin'ny zavatra hitako eto - Andao jerena ny bitsika - Tiff Seltzer na Setzler, impiry ianao no mitranga aminao, Tiff Setzler? - @ yourmomeatsmayo.- Tsara izany.
Tsy tafintohina aho.- Na ny Mo Meat Mayo.- Eny, izany tokoa.- Tsy misy maharesy ny fampiasana hena ho toy ny matoanteny.
M-E-A-T.- Na mety ho ny reninao any smayo. Midika izany fa afaka milalao ity lalao ity tontolo andro isika - Yo he moe me ats.
Nacho fromazy sy sakay. Nacho waffles.- Nacho fromazy sy sakay miaraka amin'ny tsaramaso (burgers).
OK. Ny tsaramaso britanika dia nataoko tamina toast be dia be ho ahy ary nandefa tsaramaso vitsivitsy napetrako tamin'ny toast aho ary nilaza tamiko ny britanika fa nametraka ireo tsaramaso diso tao aho. Dia nivoaka aho ary nividy ny tsaramaso Heinz natolotry ny olona rehetra ary mila milaza aho fa tsara.
Heveriko fa tsy tsara kokoa ny revolisionera.- Fantatrao ny tsara, ny tsaramaso refried misy atody sy fromazy.- Oh eny.- Ary fihetsika tapatio kely.- Tsara ny tsaramaso amin'ny maraina.- Stevie dia mpihinana toy izany.
Tadidinao fa rehefa nanao dia lavitra isika ary niditra an'ity fampiharana ity i Stevie ary nanomboka niresaka momba ny inona izany? Afon-afo? Inona no hiantsoanao azy hoe Inona no toerana fisian'ny sakafo? - Inona? Fampiharana inona? - Heverinao fa nahita ny afo aho toerana nohaninay - Eny, isaky ny mandeha amin'ny toerana izay tiako hifehezana tanteraka izay alehantsika hisakafo - maka lavaka afo avy amin'ny heatmap izy.- Oh, the Eater. - Ny heatmap an'ny mpihinana.
Fireplace.- Ity no am-patana.- Izany no nandikana azy tao amin'ny atidohan'ny Link.- Eny. - Handeha any amin'ny toerana misy afo isika. - Mahatsapa aho fa ny toerana nalehanay izay nanananay tsy tapaka ny sakafo tsara indrindra dia i Austin.
Tsara be daholo ny toerana nohaninay. - Io hariva io dia fampifangaroana Japoney Gosh. Ie.
Ary koa ity toerana nisy anay ity- Miaraka amin'ny taolan-tehezana lehibe.- Ilay steak lehibe nivoaka.- Tsia, miresaka momba ny taolan-tehezana lehibe ianao.- Toerana hafa io.
Toy ny takelaka kely amerikana ve izany? Ary avy eo ny toerana hafa dia toy ny - Tsy Texas ve izany? - Tsia, Austin io, saingy kely sy tery ilay trano fisakafoanana ary toy ny toeram-pivarotana lehibe - Ie, tsara izany - Ary manana henan'omby iray nozaraina.- Eny.- Tadidinao ve ny dia nataonao? - Izany ve? Misy iray hafa ve? - Izao tontolo izao.
Nifindra eraky ny tany isika.- Eny.- Tadidinao ve izany nitranga teo aloha, toy ny hoe nitety ny tany isika? Andao ataontsika ity - andehanana any amin'ny toerana ary hano azy ireo - toy ny biby goavambe.
Toy ny biby goavambe goavambe.- Mandeha amin'ny toerana iray fotsiny aho ary manomboka mihinana azy hatrany anaty baoritra. Tsara izany - Tsy misy maharatsy an'izany - Tena tsara - Ny waffle dia fandriana fotsiny hanehoana ny hevitro. - Lazao eo am-pandriana ny tenanao - Midika izany raha mba nisy bacon ihany io - Ity no malalako kely indrindra.
Tsy mpankafy vaza-be aho - ny tena tiako indrindra amin'izany - izaho no tena faly amin'izany. Revolisiona ity - Manana bac-o ve ianao ao am-paosinao? Bluedog1114. @ Bluedog_1114.- Ny alika manga rehetra dia nalaina - Zavatra iray ny manana ny anaranao bluedog_1114, nefa koa manana ny anaranao Twitter, izay azonao ovaina amin'izay tianao, atao bluedog tsy misy tsipika 1114.- Nesorinao ny ambany ambany? - Mampiseho izay tena tadiavinao izany .- Tianao.- Te hanana bluedog1114 izy, saingy tsy maintsy nianina tamin'ny bluedog_1114.- Tsy dia be loatra izany - fromazy fanosotra sy crème oreo - okay, eny - maninona? - Mampiaiky.
iza no manao bisikileta fuji
Dessert.- Ity dia azonao raisina sy manaikitra.- Raha toa ianao ka karazan-dehilahy.- Ireo waffles ireo dia mifanaraka tanteraka.
Ahoana no nitantananao an'izany? Atody.- Fantatr'izy ireo fa tsara izany.- Ary tsara ho anao.- Ralehilahy, tsara izany.
Adinonao ny tokony hatao amin'ny waffles. Tsy mieritreritra an'izany fotsiny ianao .- Fandriana hanehoany ny hevitr'izy ireo ianao.- Eny, saingy ny karazana teboka nomen'i Eggosis dia toy ny toe-javatra haingana izy ireo.
Ka mahatsapa aho fa tsy fantatro, toa ezaka be fotsiny izany - na izany aza, mora be ity - eny - mila potipotehinao ny oreo ataonao izao? Tsy maintsy apetrakao ao anaty ziploc izy ireo - mahafantatra lehilahy aho. Manana crumbler aho manana contact crumbler Izy potika zavatra marobe. Ataonao ao anaty kitapo eo am-baravarany fotsiny izy ireo.
Niverina potipotika izy ireo. - Isaky ny mahita azy ianao dia manao izany ny tanany, na dia tsy mikorontana aza izy. Toy izany ihany, potipotika foana.
Mikorapaka ao anaty torimasonao izy ary apetranao eo am-pelatanany fotsiny ny zavatra. - Tsy maintsy manana fifandraisana tapaka ianao, Stevie. Hainao ve fa? Azoko atao ny manangana anao miaraka amin'ilay lehilahy maloto.
Heveriko fa manana vintana izy.- Nilaza ilay tovolahy maloto fa aza manondro ahy intsony? - Tsy nahita an'izany.- Nanana izany.- Saingy fantatro i John Goodman.- Eny, ary ny fomba, ny fomba fiasan'ny lakozian'izy ireo, ny fanariam-pako dia ilay wartôgy dinôzôro kely, zavatra ambanin'izany, eny, fa izay rehetra ao an-dakovan'izy ireo dia toy izany, tsapako fa potipotika tao an-dakozia izy ireo - saingy izany koa no an'ireo sary mihetsika Version - Eny, milaza fotsiny aho fa toa tena nisy izany - Ary tena nisy ny zava-nisy satria tamin'ny dinôzôro sy niara-nandeha tamin'ny tany ny olombelona. - (mihomehy) Eny - fa marina ny anao.
Mila bacon. Ataovy angano bebe kokoa ny ranonorana misy anao amin'ny lambam-baravarana sy lamba famaohana Rhett sy Link. Azo jerena ao amin'ny mythical.com izao.
Inona no tokony hataoko amin'ny waffles?
Na maniry zavatra mamy na matsiro ianao dia ireto ny 14 amin'ireo fomba matsiro indrindra hanatsarana anaowaffles.
Krim-bolo sy siropà sôkôla.
Paiso sy tantely.
Ice cream sy voanjo voatetika.
Blueberry sy yaourt.
Voanjo sy Jelly.
Inona no azonao apetraka amin'ny waffles fa tsy ny syrup?
Miaraka amin'ireowafflehevitra ambony,ianareoTena nahazo combo tsy manam-petra izy ireo tamin'ny fahafinaretana.
Drivers: Maplesyrup, tantely, saosy fudge mafana, saosy caramel ary voankazosyrupstoy ny frezy, blueberry, blackberry ary maro hafa.
Miparitaka: dibera nokapohina, dibera voanjo, Nutella, fromazy fanosotra, fluff marshmallow, crème whim ary yogourt.
Hey Cookaholics, Chef Kendra eto anio dia manamboatra syrup maraina fisakafoanana haingana izahay ary ity no lakolosy fanompoana tiako indrindra ka tsy manadino zavatra iray ianao, makà vilany amin'ny hafanana antonony mila rano iray kapoaka handraraka ao anaty vilaninay ny kaopy iray siramamy fotsy, siramamy volontsôkôla, hazavana kely, sira 1/4 sotrokely ka andrahoinay ity ary afangaro mandra-pahatongan'ny siramamy mangotraka dia levona ianao nanomboka nanamontsana ianao ka handrehitra ary handraho mandritra ny telo na efatra minitra eo ho eo fa misy etona kely kokoa etona afaka ary heveriko fa tena matevina daholo ny syrup-tsika izao rehefa mivoaka avy eto izy dia apetrako ao anaty lovia iray ary avelao fotsiny ny etona ho etona ary arakaraky ny etona no hanafoana ny matevina. lazao aminao raha manao izany ianao dia tsy hividy syrup intsony ary ny mahafinaritra azy dia ny tsy misy siropakà katsaka fruktosa avo na hadalana eto amin'ny syrup-tsika fa siramamy volontsôkôlà siramamy ary Manondrà sira kely ary ranom-boankazo tena izy. fa nataoko ny tenako dia izao rehefa avy vitanao dia afaka manampy vitsivitsy ianao dibera ary avy eo manana zavatra toa an'i mrs butterworth ianao dia tsy manampy dibera matetika satria tiako foana ny Waffles na pancakes na izay ampiasaiko ary raha apetrakao ao anaty vata fampangatsiahana izay itahirizantsika azy ireo hatramin'ny roa herinandro izay ataontsika ary apetrakay ny dibera dia hangatsiaka ny dibera ary avy eo tsy maintsy hafanainao ny syrup sy ireo zavatra rehetra ireo, izany no antony iray hafa tsy tiako ny mametraka ny dibera ao, fa raha tsy mampaninona anao dia tsara izany, okay izany fotsiny dia hoe hamono ny hafanana isika izao, rehefa mahazo ny diberinao ianao dia miteny aho fa sotro iray izao dia hanampy ny fitrandrahana lavanila izahay hamporisika izany ary hitanao fa matevina ny bit, fa mbola e Mbola tena, hoy, feno rano, aza manahy ry zalahy ireto, apetrako ny fatiko taloha, tiaviko ireo zavatra ireo, izay karazana cheesy, fa ho eny miaraka amin'izay eny, tianao oh ny fahasoavako, izany no rano, fa tsy maninona ry zalahy nanjary matevina satria eto ity dia «syrup» vita amin'ny ilay fomba fahandro teo amin'ny iray herinandro lasa izay, ka hataoko bebe kokoa satria efa ho vita isika saingy tiako haseho anao ny halehiben'ny hatezerany ka dia hijanona fotsiny isika isaky izao ary avy eo atsangano kely ary mafana be ka ny etona etona mivoaka avy ao no mahatonga azy matevina kokoa, mihomehy rano navelany izy dia mandalo ny matevina loatra satria tsy miadana ireo chef Kendra vita an-trano ireo.
Ahoana ny fomba fihinanao waffle belza?
Manampia sôkôla sôkôlawafflekapoaka ary apetraho amin'ny vy. Rehefa afaka roaWaffles belzadia vita mahandro, manapaka azy ireo amin'ny ampahefatra. Mametraha gilasy amin'ny sombin-javatra iraywaffleary apetraho ny iray segondrawafflesombina ambony. Ampiaraho syrup ambonin'ilaywafflesandwich.16 2016.
Ahoana no hataonao crisezy waffles?
Afanaina amin'ny 200 F ny lafaoro ary hafanana nywafflevy. Ho an'nyMamono nyamin'ny mafanawafflevy (ny anay mitaky 1/2 kaopy) ary mahandro mandra-pahatongan'nywafflediacrispary volontany volamena. Ataovy avy hatrany ny masakawafflemivantana eo amin'ny fitoeran'ny lafaoro mba hanafana azy io arycrisp.
Inona ny topping pancake malaza indrindra?
Ny voasarimakirana sy ny siramamy dia mety mitazona ny satro-boninahitra fa tsy maharitra ela. Ny fandinihana nataonay dia nanambara fa ny voasarimakirana sy ny siramamy no nifidy indrindrapancake toppingisaky ny 25 taona no ho miakatra, miaraka amin'ireo 18 ka hatramin'ny 24 taona misafidy ny hatsaran-toetra azo aparitaka, dia i Nutella.
Mihinana waffle belza miaraka amin'ny syrup ve ianao?
Ao amin'nyBelzika, itywaffledia vidiana matetika eny amin'ny arabe arynihinanaamin'ny tananao, fa hita ao amin'ny efi-dite koa izy io, izay matetika fantatra amin'ny hoe gauza. Tsy maninona izay lalanamihinana ianaoio, ny Bruxelles dia tsy aroso amin'ny maple mihitsysyrup.
Fa maninona no tsy malefaka ny waffle an-trano?
Ny olana dia ny hamandoana. IlainaoSASANYizany mba hahazoana antoka fa nywafflesmalefaka, nefa be loatra ary ny hamandoana fanampiny dia hanalefaka haingana nywaffle'scrust ivelany. Ny dibera ihany koa dia singa sarotra apetraka satria mirona manao batterie mavesatra kokoa, izay kely kokoa ny vokatrawaffles crispy.
Ny dibera na menaka ve tsara kokoa ho an'ny waffles?
Araka ny Fine Cooking,SOLIKAtoy ny tavy matavy dia miasatsara kokoanoho ny matavy matanjaka toadiberasatria manampy amin'ny fanalefahana ny fandroana. Amin'ny ankapobeny dia mila sotro fihinana 1,2 eo ho eo ianaoSOLIKAao an-bata isaky nywafflemikasa ny hanao ianao. Noho izany, fomba fahandro ho an'ny 12wafflestokony ahitana 14,5 tablespoons nySOLIKA.
Inona no azoko apetraka amin'ny pancakes fa tsy ny syrup?
Ity angamba no fomba tsotra sy haingana indrindra hahazoana maple matsirosyrupmpisolo toerana: afangaroy ny jam (na jelly, na miaro, na marmalade) miaraka amina rano ao anaty vilany kely amin'ny hafanana antonony. Kapohina mandra-malama, ampio rano bebe kokoa raha ilaina mandra-pahatonganao tsy fitoviana mahafinaritra syrup.17. 2015.
Iza no topping malaza indrindra amin'ny waffles belza?
Ny syrup Maple no tampoka waffle belza malaza indrindra eto Etazonia ary manome fanombohana mamy amin'ny andronao amin'ny maha-sakafo maraina mahavoky sakafo Ny fitambaran-tsiranoka dibera sy maple no tampoka waffle belza malaza indrindra any Etazonia ary manome fiandohana mamy amin'ny andronao satria sakafo maraina mahavoky fo.
Iza no topping tsara indrindra ho an'ny bara Waffle?
Ny syrup Maple dia topping ankafizin'ny ankamaroan'ny olona noho ny antony tsara. Tsy misy bara waffle ho an'ny tena irery raha feno raha tsy misy tavoahangy ny entana. Azonao atao koa ny manandrana manamboatra syrup maple anao any an-trano raha tianao! Ity Maple Cream Cheese Syrup nataoko voalohany ity ho an'ny pancakes dia mitondra ny tsara indrindra amin'ny saosy mamy sy syrup sy maple.
Karazan-tsakafo inona avy no apetaka amin'ny waffle mofo katsaka?
Ireo hevitra topping matsiro ireo dia mahatonga ny raharaha hitrandraka waffles efa maraina be. Tapa-kisoa, voanjo voadidy ary syrup sy maple. Holatra voaendy, tongolo vita amin'ny caramel ary Parmesan voakiky. Katsaka mamy sy syrup misy mapasy. Ny mofo katsaka dia mihofahofa sakay, fromazy cheddar ary fanosotra marikivy.